‘ कांग्रेस डा. गोविन्द केसीको हत्या गरेर राजनीति गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको हो ?’ - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
‘ कांग्रेस डा. गोविन्द केसीको हत्या गरेर राजनीति गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको हो ?’
प्रकाशित मिति: ७ श्रावण २०७५, सोमबार July 23, 2018
काठमाडौं । नेकपाका अध्यक्ष तथा पुर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले कांग्रेस समाप्त हुने खेलतिर लागेको बताएका छन् । पुष्पलाल स्मृति दिवसमा आयोजीत बिशेष कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै दाहालले गोविन्द केसीको बुई चढेर राजनीति गरे कांग्रेस चाडै समाप्त हुने बताए । दाहालले डा. गोविन्द केसीसँग वार्ता हुने र सहमति पनि हुने बताए ।
केसीको जीवन रक्षाको दायित्व सरकारको भएको बताउँदै कांग्रेसले केसीको हत्या गरेर लासमाथी राजनीति गर्न खोजेको आरोप लगाए । केसीसँग वार्ता गर्न सरकार तयार भएको र लचकता पनि अपनाउने बताए । उनले कांग्रेसलाई गोविन्द केसीको बुई चढेर राजनीति गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको हो भनी प्रश्न समेत गरेका छन् । उनले कांग्रेस एजेण्डा बिहिन भएर केसीको मागका पछि लागेको आरोप पनि लगाए । उनले अब काँग्रेस समाप्त भएको ठोकुवा पनि गरे ।
‘मैले नजिकबाट हेरिरहेको छु, प्रतिक्रान्तिका तत्वहरु विभिन्न बहानामा उल्ट्याउन खोजिँदैछ । १५ चोटी पहिले नै गोविन्द केसी आन्दोलन बसिसकेका छ । लोकतान्त्रिक भन्ने सरकारकै बेलामा सबैभन्दा बढी अनशन बसेका थिए’, दाहालले भने, ‘गोविन्द केसीको काम अनशन बस्ने हो, नेपाली समाजले पचाइसकेको छ । उनीसँग वार्ता हुन्छ, सहमति पनि हुन्छ । उनको जीवन रक्षको पहिलो प्राथमिकता हो सरकारको, त्यही भएर केसीको जीवन बचाउन सरकारले टोली जुम्ला पठायो ।’
अध्यक्ष दाहालले सरकारले केसीको जीवन रक्षा गर्न खोज्दा अर्को पक्ष (नेपाली कांग्रेस) ले केसीको हत्या गर्न खोजेको बताए । ‘सरकार बचाउन खोज्दैछ तर नेपाली कांग्रेस गोविन्द केसीको हत्या गर्न खोज्दैछ । नेपाली कांग्रेसले ज्यान लिन खोजेको के हो ?’, उनले भने, ‘नेपाली कांग्रेस गोविन्द केसीको पुच्छर समातेर तर्न खोजेको हो ? कांग्रेस यति कम्जोर र निम्छरो भइसकेको हो ? कांग्रेसको आफ्नो एजेन्डा नभएपछि तोडफोडमा उत्रिन खोजेको हो ?